Ukubuyekezwa kwesoftware okubuyiselwe kahle kwe-iPhone ku-Win / Mac ku-2020 (Ukuhlelwa Komhleli)
Ukubuyiswa Kwedatha ye-iOS
Ukubuyiswa kwesistimu ye-iOS
Isipele sedatha ye-iOS & Buyisela
Isihlanzisi sedatha ye-iPhone
Shintsha Ukudluliswa Kweselula
I-Data Data Recovery
Isipele sedatha ye-Android & Buyisela
Isikhiphi sedatha ye-Android Ephukile
I-iPhone Data Recovery
Phatha Idatha Phatha
Isoftware Yokubuyiselwa Kwemininingwane
Kugcine ukubuyekezwa ngo-Agasti 13, 2020 nguJason Ben
Uyemukelwa ku-2020. Futhi yisikhathi esikhulu sokuthi sibuyekeze uhlu lwethu lwe-software yokubuyisela idatha ye-iPhone. Besilokhu sibuyekeza lolu hlu cishe iminyaka eyi-4 futhi njalo ngonyaka simane sibhale kabusha lo msbenzi ngombhalo wokususa owawubhaliwe ngaphambili okwenze ukuthi kudideke kwesinye isikhathi. Ngakho-ke, kulokhu. Ngizongeza okuthile engicabanga ukuthi kubalulekile futhi kugcinwe umbhalo wokuqala ugoqwe (Uma ufuna ukufunda okwedlule okwedlule, vele uvule imenyu ye-accordion). Ngiyethemba ukuthi lokho kuzokusiza ukuthi ube nokubuka konke mayelana nokukhula kwale mikhiqizo esikhathini eside esedlule.
Isofthiwe yokubuyisa idatha ye-iPhone kusuka emikhiqizweni eminingi itholakala ngokufana nangayo. Zonke zisekela ukuthola oxhumana nabo, izithombe, umlando wokushaya ucingo, umyalezo wombhalo, umyalezo we-WhatsApp, inothi, ikhalenda, ibhukumaka le-Safari nomlando, njll. Okwenza kube nzima ngathi ukuhlukanisa phakathi kokuwina nokulahlekelwa. Kepha, yilokho esikwenzayo.
Manje, ake sibukeze kafushane iSoftware yethu Yokubuyisela Idatha Kakhulu ku-2020. Sisebenza i-rrfone ku #1 ngesikhundla sayo esicebile kanye ne-iMyfone ku #2 ngokugqama kwayo ekutholeni umlando wengxoxo wohlelo lokusebenza lokuxhumana nabantu. Futhi i-FoneLab yehliselwe ku- #3 ngezibuyekezo ezimbalwa zesici. Futhi singeza iMobiSaver ku- #5.
Nalu uhlu lonke:
#4 UcingoRescue lwe-iOS
I-dr.fone iyindlela yokuqala yamakhasimende ye-iPhone Yokubuyisa emakethe. Yethulwe e-2012 kwathi ngemuva kweminyaka engu-7-Refine iba namandla kakhulu futhi inothile yesici, nokho isebenzisa kalula ithuluzi lamathuluzi wefoni ngokuhlanganisa izinyunyana zocingo eziningi ezifana neDlulisa, Shintsha, Backup & Buyisela, Vula, Lungisa, Sula futhi usanda kufaka iRestore Social App, okwenza i-dr.fone ikhambi eliphezulu kakhulu leselula. Isihawu siwukuthi, ngokubuyiswa kwedatha yohlelo lokusebenza lomphakathi, i-dr.fone ayisasekeli ukuthola i-Messenger Messenger & Attachments kanye ne-Line Messages, ungalulama kuphela i-WhatsApp, Kik ne-Viber.
Thola i-dr.fone - i-iOS Phinda Ubuye Manje
i-dr.fone yisinqumo esihle kunazo zonke lapho udinga ukubhekana neDatha yakho ye-iPhone kufaka phakathi ukululama, ukuhambisa nokubuyisela isipele njll. Kuyisixazululo esisodwa sako konke ukuphathwa kwemininingwane yefoni yakho kufaka phakathi ifoni ye-android. Ngobuchwepheshe be-robust kanye nokuhlala isikhathi eside, nakanjani kuthembekile.
Hlola ishadi lezinhlobo zamafayela elixhasiwe>
Funda isibuyekezo se-dr.fone ku-2018
I-#2 dr.fone yamathuluzi (i-Wondershare Dr.Fone ye-iOS yangaphambili)
i-dr.fone toolkit - I-iOS Data Recovery ithola kabusha idatha elahlekile ku-iPhone futhi inamandla okuthola idatha ngokuqondile kusuka ku-iTunes naku-iCloud Backup, okungasiza ukonga idatha noma ngabe idivaysi yakho ye-iOS ilahlekile noma ilimele. Isebenza kuzo zonke izinhlobo ze-iOS kufaka phakathi i-iOS 12. Ukubuyisela oxhumana nabo, imilayezo ye-SMS, umlando, ukuqoshwa kwekhamera, ividiyo, imitapo yolwazi yomculo, imemo yezwi, ikhalenda, amanothi, izikhumbuzi, amabhukumaka weSafari, Kik, Viber, Messenger, WhatsApp ne-Line alula ngokumangazayo.
Konke okudingeka ukwenze ukuxhuma idivaysi yakho ye-iOS kukhompyutha yakho kanye namathuluzi wokubuyisa idatha yamafayili alahlekile ukuze alulame. Ungahlola kuqala idatha elahlekile kusuka kudivayisi nakumafayela wesipele ngaphambi kokusebenzisa ukululama.
I-dr.fone toolkit iyisoftware ethandwa kakhulu emakethe. Okukhulu ukuthi ungakhetha ukubuyisa idatha ku-iPhone noma kwikhompyutha. Futhi ingxenye yebhonasi ukuthi isekela ukwenza isipele futhi ubuyisele imiyalezo ku-WhatsApp, LINE, Viber, naku Kik ngaphandle kweMessages (kufanele ukhokhe imali eyengeziwe ukuthola lezo zici).
I-D-back ihhashi elimnyama lokuncintisana eminyakeni emibili edlule phakathi kweMakethe ye-iPhone Data Lokubuyisela. Ku-2018, iMyfone yayisungule imikhiqizo eminingi efana ne-LockWiper, i-iPhone WhatsApp Recovery, i-AnyRecover yeWindows, i-AnyRecover ye-Mac, Fixppo, TunesFix, TunesMate, iTransor, iTransor Lite. Yebo, badidekile ngamagama, bafuna ukufunda okuningi, bandisa i-region ukuze babheke incazelo ecacile njengezansi.
//I-LockWiper: Susa i-Apple ID ne-Lock Screen Passcode kusuka ku-iPhone ne-iPad.
//Ukubuyiselwa kwe-WhatsApp WhatsApp: Ithuluzi elithathwe ku-iPhone Data Recovery, linikezelwe ekutholeni imiyalezo elahlekile / esusiwe ye-WhatsApp kusuka kudivayisi ye-iOS. Kushibhile kakhulu kunokubuyiselwa kweDatha ye-iPhone ngenkathi ngicabanga ukuthi le ndlela yokugcina iyindlela enengqondo kakhulu.
//I-anyRecover yeWindows: Ithuluzi Lokuthola kabusha iWindows Lost.
//I-AnyRecover ye-Mac: Ithuluzi Lokuthola kabusha i-Mac Lost.
//I-Fixppo: Ithuluzi Lokubuyisela i-iOS System.
//I-TunesFix: Lungisa Amaphutha we-iTunes. Ngingakhuluma lokhu kungaba yithuluzi eliwusizo njengoba ngihlushwa amaphutha e-iTunes kakhulu.
//I-TunesMate: enye indlela ye-iTunes yokuphatha idatha ye-iPhone kwikhompyutha.
//iTransor: enye i-iTunes eya ku-Backup bese Ibuyisa Idatha ye-iPhone / iPad.
Ngokuqondene nokubuyiselwa kwedatha kwe-iPhone, iMyfone igxile ekubhekaneni nedatha ye-iPhone njengoba ubona ukuthi abanalo ithuluzi lokubuyisa idatha ye-android okwamanje. Ngokubona kwami, ubuhle obukhulu kunabo bonke be-D-Back ingabe isekela ukuvuselelwa kohlelo lokusebenza kwezenhlalo kufaka phakathi i-WhatsApp Data, Idatha ye-KiK, Idatha ye-WeChat, Idatha ye-Viber ne-LINE yedatha ebanzi kakhulu kunezinye izimbangi.
Thola iMyFone D-Back Manje
I-D-Back iyinkanyezi ekhuphukayo, inikezelwe, inobuchwepheshe futhi iyinkimbinkimbi. Kuyinto umdlali wokuncintisana wembewu onamandla kakhulu ku-niche yokutakula i-iPhone. Sizoyinaka njalo. Mhlawumbe izokhuphukela ku- #1 ngonyaka olandelayo, manje ngiyibeka ku #2.
Funda isibuyekezo se-iMyFone D-Back ku-2018
#3 iMyFone D-Back (okusha)
I-D-Back iyithuluzi elisha kakhulu lokuthola i-iPhone. Njenge-newbie ye-software yokutakula i-iPhone, iMyFone inomkhiqizo onobuhlakani obukhulu - i-D-Back (ingabe isho i-Data-Back?). Kumele ngithi yiyona ndlela yokuncintisana eyedlula zonke ye- dr.fone.
Uzothola izici eziningi ezicatshangwayo ku-D-Back, futhi engiyithandayo iyindlela ebizwa ngokuthi yi- "Smart Lokubuyisela" lapho udinga nje ukulandela iwizadi yokutakula futhi uzobuyiselwa kumodi efanele.
Nasi lo logic:
Ukulahleka noma ukususwa kwedatha ngengozi -> Phinda usebenzise kudivayisi ye-iOS
Ukusetha kabusha kwefektri, ukugqekeza kwejele noma ukuthuthukiswa kwe-iOS -> Phinda ususe ku-iTunes Backup
I-iPhone ilahlekile, ilimele noma iphukile -> Thola i-iTunes Backup
I-iPhone ikhiywe iphasikhodi ekhohliwe nabanye -> Thola i-iOS yedivayisi
Ungene ku-Apple log, imodi yokuthola kabusha, izikrini ezimnyama .. -> Lungisa uhlelo lwe-iOS
Uma unenkomba encane ngokwenzeka ku-iPhone yakho, ungazama kangcono iModi yokubuyisa i-Smart.
Kuyindlela enengqondo yabantu abafuna ukuthola idatha ye-iPhone elahlekile. Kulabo abafuna ukuthola umyalezo kusuka ku-IM App kufaka phakathi i-WhatsApp, Kik, WeChat, Viber, Skype ne-Line, i-D-Back kungaba yisinqumo esihle kakhulu ngoba awudingi ukukhokha okwengeziwe ukuze uyithole. Okusha empini kepha kuncintisana, ngicabanga ukuthi kutholakele inani eliphezulu lentengo.
#3 I-Aiseesoft FoneLab
Uma ufundile lokhu okuthunyelwe eminyakeni edlule ye-3, uyazi ukuthi i-FoneLab ibuse i- #1 yeminyaka futhi kungokokuqala ukuthi sikuhudule phansi futhi ngqo ku #3. Ngizosho ukuthi isilinganiso esikhulu sokunciphisa izinga laso asikho ukuthuthuka okuhlekile. I-FoneLab inesilinganiso esihle sokuthola futhi .. futhi akukho okunye. Ukuphuculwa kwayo kuhamba kancane kunomakethe. Ngokuqondene nohlelo lokusebenza lomphakathi, lisekela kuphela iMilayezo ye-WhatsApp kanye nokubuyiselwa kokunamathiselwe. Njengoba ngibhala lokhu okuthunyelwe i-FoneLab ibuyekeze ukusekela i-Kik ne-LINE Data Recovery, isekela ukutakula idatha yedatha yezenhlalo manje kufaka phakathi i-WhatsApp, Kik ne-LINE. Yize enza umsebenzi omuhle ekutholeni iMiyalezo Yombhalo (kanye neMessages), Izithombe, Oxhumana Nabo, i-WhatsApp, Amanothi, iLog Log, njll. Njengabo abanyeqhudelana, ilahlekelwa ukuphakama kwayo okuholayo. Futhi ngifanele ngithi kufanele bavuselele ukwakheka kwesibonisi, kuyindlela yakudala impela.
Win Landa Ukulanda i-Mac Win Landa Ukulanda i-Mac Thola Isilingo Samahhala nge-imeyili Yokulanda Kamuva Kukhompyutha
Faka ikheli lakho le-imeyili, Sizokuthumela izixhumanisi zokulanda zemikhiqizo yethu.
Note: Umkhiqizo wethu utholakala kuphela kwiWindows naku-Mac OS.
Njengoba i-dr.fone ne-D-Back isebenza ngokushesha okukhulu, i-FoneLab ayikwazi ukuhambisana nabo futhi ilahlekelwe ukubeka phambili ku-2018. Naphezu kwakho konke lokho, kusesetshenziswa elithembekile lokuthola i-iPhone futhi sicela uqaphele ukuthi linikeza inani elingcono.
Funda isibuyekezo se-FoneLab ku-2018
I-#1 FoneLab i-iPhone Data Revenue (Umthengisi Ophezulu we-2018)
Kulo nyaka, Sishiya indawo yokuqala eya ku-FoneLab i-iPhone Data Recovery njengoba inezinga eliphakeme kakhulu lokubuyisa idatha ye-iPhone phakathi kwalabo ezincintisana nabo embonini, futhi manje usungakwazi ukuxazulula ama-glitches amaningi ngamamojula wayo: i-iOS Sibuyisele Isistimu kanye ne-Isipele Sedatha ye-iOS.
UFonelab angalulama kabusha amafayela ku-iCloud ne-iTunes kanye nokubuyisa imininingwane kwi-iDevice. AbakwaFoneLab baphinda bavule amafayela afana noxhumana nabo, umlando wekholi, imiyalezo ye-SMS, izikhumbuzi, umlando we-Safari, amanothi, ama-albhamu wezithombe, umculo, amavidiyo, uhlu lwadlalwayo nezinye izinto eziningi kufaka phakathi amafayela asuswe kudala. I-FoneLab ye-iOS yisinqumo esihle sokubuyisa noma iyiphi idatha isuswe noma ilahlekile ngengozi.
AbakwaFoneLab bebelokhu bejaha abantu abancintisana kanzima kangaka. Muva nje iye yathuthukiswa ngamamojula amabili - Isistimu Yokubuyisa i-iOS kanye ne-Isipele yedatha ye-iOS & Buyisela.
Ake sibheke ukuthi kuzosilethela ini:
Ukubuyiswa kwesistimu ye-iOS:
Ungalungisa i-iPhone yakho ngemodi ye-DFU (i-tootip), Imodi yokubuyisa (i-tootip), i-Apple Logo noma imodi ye-headphone ngethuluzi lokubuyisa uhlelo lwe-iOS. Ngikubheka njengengxenye yokuvuselelwa kwedatha enakekela ezinye izinkinga ezibambekile.
Isipele Sedatha ye-iOS Nokubuyisa:
Kungani ngisebenzisa Isipele Sedatha ye-iOS & Buyisela ukwenza isipele i-iPhone yami esikhundleni se-iTunes? Ezimweni eziningi, isici sokusekelayo sika-iTunes sanelisa ngokuphelele isidingo sakho. Ungasekelwa i-iPhone yonke nge-iTunes futhi ubuyisele i-iPhone yakho ngokuchofoza okukodwa.
I-iTunes ingenza into efanayo.
Kuthiwani uma ufuna ukwenza isipele eminye imininingwane yakho ku-iPhone noma ufuna ukuthola isithombe esisodwa kuphela kusuka kwisipele sakho? Yilapho uyidinga. Njengoba ngihlala ngithi ukusipele kuwumkhuba omuhle.
I-FoneLab iyisofthiwe engcono kakhulu yokuvuselela idatha ye-iPhone emakethe futhi isisincomo sethu esihle kakhulu. Okukhulu ukuthi ungakhetha ukubuyisa idatha ku-iPhone noma kwikhompyutha. Futhi ingxenye yebhonasi ukuthi isekela ukwenza isipele futhi ubuyisele imiyalezo ku-WhatsApp, LINE, Viber, naku Kik ngaphandle kweMessages (kufanele ukhokhe imali eyengeziwe ukuthola lezo zici).
#4 I-PhoneRescue ye-iOS
I-PhoneRescue ihlala iyintandokazi yami. It got design emangalisa ukwakheka kanye umhlabeleli isipiliyoni yomsebenzisi design. Uma usuqalile futhi uzama i-PhoneRescue, uzothola ukuthi iyintekenteke kakhulu futhi yenziwe ngezinto eziningi nemiyalo ecatshangiwe. Ngiyamhlonipha kakhulu umphathi womkhiqizo. Ukubheka i-dr.fone ne-D-Back njengesibonelo, i-PhoneRescue ithuthukisiwe ukusekela ukuthola i-WhatsApp, i-LINE ne-KIK.
Ngizoyibeka ku #1 uma iqembu lami lingivumela ukuba ngenze lokho. Ngenkathi icubungula ukuqina nokuqina, ihlala ku- #4 ilungile Ngizokusikisela ukuthi uzozama uma uthanda.
Funda isibuyekezo se-PhoneRescue ku-2018
I-PhoneRescue iyona ebheka kakhulu phakathi kwazo zonke lezi zinto ezilulama ezingcono kakhulu kune-D-Back. Uzothola imiyalo eminingi phakathi naleyo nqubo yokuthola idatha kabusha ukuze udideke ukuthi kwenzekani noma ngikuphi.
Uma usuqalise uhlelo, uzobona ithiphu eningiliziwe ngezinto okudingeka uzenze ngaphambi kokusebenza kabusha.
Futhi uzobona incazelo ngamabomu yokuthi ungayikhetha kanjani imodi yokutakula ngokuya ngezimo.
Vele Khetha imodi bese uqala ukubuyela emuva.
Ngokuvamile, amanani okuthola kabusha awo wonke la mathuluzi avaliwe kakhulu, ngoba, uzoba nesici esiyingqayizivele sokuhlukanisa kubo bonke oncintisana nabo.
Yebo, i-PhoneRescue inezici ezintathu ezivelele:
Ukusebenza okungcono kokuthola usizo kugeleza ngemiyalo ebabazekayo.
Njengokuthi dr.fone kuphela, ukhululekile ukukhetha ukubuyisa i-iPhone noma ukubuyisa ikhompyutha.
Isithunzi esibonakalayo somsebenzisi.
Ukutholwa Kwemilayezo ye-WhatsApp, Line and Kik.
Ngakho-ke, ngiyibeka ezingeni #4.
#5 I-EaseUS MobiSaver
I-EaseUS ngumkhiqizo weminyaka engu-14 ekwakheni izinto zokutholwa kwedatha. Banamathuluzi okuthola i-iPhone, i-Android, i-Windows ne-Mac, Izinsiza Zokuhlukaniswa kweDiski, Amathuluzi wesipele nokudluliswa kwedatha. Ukumboza okukhulu kusetshenziswa kwedatha kuyenza ukuthi ibe ngunjiniyela wokuphinda uvule idatha. Isici sokutakula seMobiSaver sisebenza ngama-greats, kuyilapho sine-interface yomsebenzisi ephelelwe yisikhathi ebi kakhulu kuneFoneLab. Futhi isekela izinhlobo zedatha okungenani ukuthola kabusha. Ngakho-ke kufanele kube sendaweni yokugcina.
Thola i-EaseUS MobiSaver Manje
Kuthuthukiswe iqembu le-software eyaziwayo yokusiza idatha ngenkathi iMobiSaver ingacoliswanga kangako ezicini eziningi. Ngenkathi inentengo enhle kakhulu eyenza kukufanele ukuzama.
// Ishadi Lezinhlobo Zedatha Esekelwa
Imilayezo & Izinamathiseli
Kik & Izinamathiseli
I-LINE & Izinamathiseli
Izithombe zohlelo lokusebenza
Ividiyo yohlelo lokusebenza
Umsindo wohlelo lokusebenza
Imibhalo yohlelo lokusebenza
Ukubuyekezwa okuphezulu kakhulu kwe-5 ye-Android Best
Phinda Uthole Imininingwane ye-iPhone
Phinda uthinte oxhumana naye
Phinda ususe isithombe
Phinda Ususe Umbhalo Obhaliwe
Phinda ususe iMessage
Phinda ususe WhatsApp
Phinda Ubuye Umlayezo osusiwe
Phinda ungene Log Izingcingo Esusiwe
Phinda ususe ividiyo
Phinda uqaphele inothi
Phinda ususe iMemo Yezwi
Phinda ubhukhimakhi okususiwe
Phinda Ususe Ikhalenda
Phinda uthole izithombe kusuka ku-iPhone ekhubazekile ngaphandle kwesipele
Catch A Cheter
Phinda Ubuyise Idatha ye-iPhone
Phinda ususe ifayela le-Android
I-copyright © 2014 - I-2020 Izisetshenziswa ezihamba phambili Zeselula namathuluzi e-Multimedia .. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Sisebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi uthola ulwazi olungcono kakhulu kuwebhusayithi yethu. Ngokusebenzisa isiza sethu, uyavuma okwethu Inqubomgomo yobumfihlo.KULUNGILE, NGIYITHOLILE